Kheladi - सकसमा कराते
असोज १५, २०७८ २३:१२
‘टोकियो ओलम्पिक खेल्न नपाएर के भयो त ? हामी विश्व च्याम्पियनसिपमा त्यो जोस पोख्छौं ।’
यही लक्ष्य लिएर नियमित अभ्यासमा पसिना बगाउन थालेको राष्ट्रिय कराते टोली फेरि एक पटक अन्यौलको भूमरीमा फसेको छ ।
नोभेम्बर १६ देखि २१ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा हुने २५ औं सिनियर विश्व कराते च्याम्पियनसिपका लागि कराते टिमले दिनरात नभनी तयारी गरिरहेको छ ।
तर, नेपाली करातेको नियामक निकाय नेपाल कराते महासंघकै अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता समस्या समाधान भइनसकेकाले विश्व च्याम्पियनसिप पनि खेलाडीका लागि ‘आकासको फल’ हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
दुई वर्षअघि आफ्नै देशमा सम्पन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपालले ५१ स्वर्ण पदक, ६० रजत र ९५ कांस्य गरी कुल २ सय ६ पदक जितेको थियो ।
दक्षिण एसियाली खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिताको पदक तालिकामा नेपालले दोस्रो स्थान हासिल गर्दा करातेको योगदान ठूलो थियो । करातेले १० स्वर्ण, ४ रजत र ५ कांस्य गरी कुल १९ पदक जितेको थियो ।
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धाबाट करातेले नेपाललाई सधै खुसी दिलाएको इतिहास छ । सागदेखि एसियाली खेलकुदसम्म करातेमा नेपालले पदक जितेको छ । इन्चोन एसियाडमा करातेको एकमात्र पदकले नेपालको इज्जत जोगिएको थियो ।
सन् १९९९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न आठौं साग (तत्कालीन साफ खेलकुद) मा पनि पहिलो सहभागितामै करातेले १४ स्वर्ण पदक जितेर नेपाली खेलकुदको सान उँचो बनाएको थियो ।
२० वर्षपछि घर फर्किएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा उच्च सफलता हासिल गरेपछि नेपाली कराते टोलीको मनोबल पनि उस्तै गरी उकासिएको थियो ।
जापानमा हालै सम्पन्न टोकियो ओलम्पिकमा पहिलो पटक कराते समावेश गरिँदा त्यहाँको तातामीमा नेपालको बलियो उपस्थिति गराउने उद्देश्यका लागि नेपाली खेलाडी र प्रशिक्षकहरू जुर्मुराएका थिए ।
तर, जुलाई २३ देखि अगस्ट ८ सम्म भएको टोकियो ओलम्पिक खेल्ने नेपाली करातेको सपना पूरा हुन पाएन । यसमा खेलाडीको कुनै दोष थिएन । प्रशिक्षक पनि निर्दोष थिए । आफ्नै प्रयासमा वर्षभर नै अभ्यास गरिरहने थोरै खेलमध्ये कराते एक हो । त्यसमाथि राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीले त नियमित अभ्यास गरिरहेकै हुन्छन् ।
विश्व कराते महासंघ (डब्लूकेएफ) मा नेपाल कराते महासंघ लामो समयदेखि नवीकरण नभएकाले टोकियो ओलम्पिकको छनोटका लागि नेपाली खेलाडीले गरेको कठिन मिहिनेत खेर गयो । नेपालले छनोट प्रतियोगिता नै खेल्न पाएन । ओलम्पिकमा पहिलोपल्ट खेल्ने नेपाली खेलाडीले आफ्नो जोस पोख्न पाएनन् ।
प्रशासकहरूले खेलाडी र प्रशिक्षकलाई सान्त्वना दिए, ‘यसपालिलाई त्यस्तै भयो । अब आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपालको सहभागिता जसरी पनि गराउँछौं ।’
फेरि त्यो सान्त्वना, सान्त्वनामै सीमित हुने अवस्था आएको छ । पछिल्लो ८ वर्षदेखि डब्लूकेएफमा नवीकरण नभएका कारण विश्व च्याम्पियनसिपमा पनि खेलाडीले चाहेर सहभागिता जनाउन सक्ने अवस्था छैन । नवीकरणका लागि मात्र कराते महासंघले डब्लूकेएफलाई ५६ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बताइएको छ ।
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण पदक जितेकी अनु अधिकारीले निकायक निकायको सानो गल्तीले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू खेल्न नपाउनु दुःखद पक्ष भएको बताइन् ।
‘लामो समयदेखि प्रशिक्षण गरिरहेका थियौं । अन्तिम समयमा आएर महासंघले सदस्यता नवीकरण नगर्दा पहिलो पटक ओलम्पिकमा समावेश भएको करातेमा भाग लिनबाटै हामी वञ्चित हुनुपर्‍यो । एकदमै दुःख लागेको छ,’ अनुले भनिन्, ‘हाम्रो वर्षौंदेखि मिहिनेत खेर गएको छ । सपना टुटेको छ ।’
कोभिड १९ महामारीको समयमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डअपनाएर करातेले प्रशिक्षण गरिरहेको छ । अनुले सिनियर खेलाडीको एक्सपोजरका लागि प्रतियोगिताहरू आयोजनाको आवश्यकता औंल्याइन् । साथै खेलाडीको प्रशिक्षण र डाइटमा पनि संघले विशेष ध्यान दिन उनको सुझाइन् ।
‘दुई वर्षदेखि सिनियर टोलीका लागि कुनै पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएका छैनन् । त्यसैले खेलाडीहरूले शारीरिक रूपमा फिट रहन प्रशिक्षण गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर भए पनि प्रतियोगिता गराउनुपर्ने थियो, तर महासंघले चासो देखाएन । विदेशमा सबै खेलकुद सञ्चालन भइरहेका छन्,’ उनले थपिन्, ‘महासंघले प्रतियोगिता नभए पनि राष्ट्रिय खेलाडीका लागि नियमित प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
अनुले विश्व च्याम्पियनसिपका लागि समयमै उचित तयारी र योजना बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘दुबईमा विश्व च्याम्पिनसिप हुँदै छ । प्रतियोगिता नजिकिँदै छ । अहिलेसम्म केही तयारी र योजना छैनन् ।’
उचित समय र प्रशिक्षण पाएमा खेलाडीले राम्रो नतिजा ल्याउनेमा उनी विश्वस्त छिन् । तर समस्या भने संघ वा सम्बन्धित निकायमै छ । अभिभावकका रूपमा रहेको संघले खेलाडीको संरक्षणका लागि उचित कदम चाल्नुपर्ने उनको माग छ ।
‘हाम्रो अभिभावक नै संघ हो । स्वर्ण पदक जितेवापत महिनाको ६ हजार पाउँछौं । तर त्यसले के-के गर्ने ? कोठाभाडा र खाना पनि कतिपय खेलाडीले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले आर्थिक अभाव खेपिरहेका छन्,’ अनुले भनिन्, ‘संघले नै यसप्रति ध्यान दिए खेलाडीले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देख्ने थिए ।’
१३ औं सागका अर्का स्वर्णधारी विप्लवलाल श्रेष्ठले प्रशिक्षण गर्नुको कुनै लक्ष्य नरहेको सुनाए । ‘लामो समय प्रशिक्षण गरे पनि मिहिनेतको प्रतिफल नै नपाएजस्तो महसुस भएको छ । एउटा उमेरसम्म मात्र खेल्न सकिन्छ, त्यसैले यो समयमा जतिसक्दो धेरै खेल खेल्न पाए त्यति नै राम्रो नतिजा ल्याउन सक्छौं । समयमा नै संघले यसप्रति ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
कयौं ऐतिहासिक पदक दिलाएको नेपाली करातेलाई पनि फुटबल र क्रिकेटजस्तै प्राथमिकतामा राख्न उनले खेल निकायसँग आग्रह गरे ।
‘धेरै प्रतियोगिता खेलेमात्र खेलाडीले प्रदर्शनको स्तर सुधार गर्न सक्छन् । यसलाई ध्यान दिएर अगाडि बढाइयो भने मात्र नयाँ खेलाडीहरू उत्पादन हुन्छन्,’ उनले थपे, ‘महासंघले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएको छ । सागपछि महासंघ छैन जस्तो महसुस भएको छ । गुरुहरूको व्यक्तिगत फोनबाट हामीले प्रशिक्षण गरिरहेका छौं । तर यो जिम्मेवारी भने संघ तथा खेल निकायको हो,’ विप्लवको गुनासो थियो ।
उनले विश्व च्याम्पियनसिपको तयारीमा समयमै जुुट्न महासंघलाई आग्रह गरेका छन् ।
कराते महासंघका अध्यक्ष पुरेन्द्रविक्रम लाखेले संस्थामा अनुदान नआएका कारण नवीकरण गर्न नसकेको बताए । तर त्यहि कारण खेलाडीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्नबाट बञ्चित हुनु नपर्ने उनको भनाई छ । विगत लामो समय करातेमा विवाद भएर दुई संघ अस्तित्वमा भएका कारण समस्या आएको उनको भनाइ थियो । एउटा महासंघ राष्ट्रिय र अर्को महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त रहेका थिए ।
‘विगतमा सबै अनुदान राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को महासंघमा जान्थ्यो । अहिले पनि हामीले पाउन सकेका छैनौं । राखेपबाट आउने अनुदान नै हामीकहाँ नआएपछि कसरी पैसा तिरेर नवीकरण गर्नु ? तर, हामीले पहल गरिरहेका छौं । समस्या समाधान गर्ने बाटोमा छौं,’ लाखेले खेलाडीसँग भने, ‘लामो समयदेखि अनुदान खाने र नवीकरण पनि नगर्नेजस्ता गैह्र जिम्मेवार काम भइरहेका छन् । अब नवीकरण गरेरमात्र हुँदैन । त्यस्ता गैह्रजिम्मेवार काम गर्नेमाथि कारवाही पनि हुनुपर्छ ।’
लाखेले ग्रेडिङको नाममा लाखौं रुपैयाँ वर्षेनी उठाएर खाने तर सम्बन्धित निकायमा नवीकरण नगर्ने समस्याका कारण नेपाली कराते समस्यामा रहेको स्वीकारे । उनले करातेमा ग्रेडिङको नाममा अनियमित रुपमा पैसा उठाउने क्रमलाई पनि नियमनकारी सरकारी निकायले रोक्नुपर्ने माग राखे ।
‘हामी नवीकरण भएन, खेलाडीले खेल्न पाएनन जस्ता सतही कुरामै अल्मलियौं भने अझै पनि समस्याको जडमा पुग्न सक्दैनौं । करातेमा धेरै विकृति छन् । त्यस्ता विकृति र विसंगतिविरुद्ध लड्नुपर्छ । अनियमित काम गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकियो भनेमात्र समस्याको समाधान हुन्छ,’ उनले थपे ।
महासंघ नवीकरण नभएका कारण खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा समस्या आएको भने अध्यक्ष लाखेले स्वीकारेनन् । ‘हाम्रा खेलाडीले नियमित सहभागिता जनाइरहेका छन् । अनावश्यक रुपमा विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको छ । नभएको कुरालाई उचाल्ने पनि बानी छ यहाँ । यसै हप्तामात्र अनु अधिकारी प्रिमियर लिग खेल्नका लागि रुस गएकी छिन् । नवीकरण नभएका कारण नभएको भए उनी कसरी गइन त ? हाम्रा खेलाडीले भाग लिएका अरु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु के हुन त?,’ उनले प्रश्न गरे ।
स्तर, स्थिति र इपिएल
पिएसजीको खुसी कति टिकाउ ?
सुमन र सरोज अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न युरोप जाने
अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन करातेमा स्वर्ण विजेता सुमन सम्मानित
उमा खुला करातेमा आयुश र सविना सर्वाेत्कृष्ट
उमा खुला कराते प्रतियोगिता सुरु
नेपाली कराते टोलीलाई बंगलादेशमा चार स्वर्ण
सोतोकान टोली भारत जाने